Posted by အင်ကြင်းသန့် at 10:57 PM
တကယ့်ပန်းပွင့်လေးသာဆို ဖတ်ရင်းနဲ့ ငိုမိမယ်ထင်တယ်။
ငါ့ညီမ ပန်းလေးသရုပ်ဖော်သွားတာ ကောင်းလိုက်တာ။
ဂျင်းရေ ချစ်လို့ပြောလိုက်ဦးမယ်၊ “မ” နောက်က “ဘဲ”လိုက်တယ်နော်။
ဟုတ်...မမ...ဂျင်း ချက်ချင်းပြင်လိုက်တယ်နော်။ ကျေးဇူးပဲ။း)
ဒေါ်အင်ကြင်းလေး သီချင်းကိုခံစားရေးဖွဲ့ လို့သာပေါ့ ကောင်းလိုက်တဲ့ ခံစားချက်တွေ ပန်းတစ်ပွင့်သေဆုံးခြင်း ကိုပိုနှစ်သက်မိတယ် တကယ်အသက်ပါတယ် ရေးထားတာ :)
ကြည့်ရတာ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ရေးထားတယ်ထင်တယ်..
ငါ့ညီမ ဒီလောက်နုနုနွဲ့နွဲ့လေးတွေ ရေးတတ်မှန်းမသိခဲ့ဘူး
@ကိုချိုကျ>>>အသက်ပါမှာပေါ့ တကယ်မျက်ရည်တွေနဲ့ ရေးထားတာကိုးးးးးးး။း)
@မချော>>>ရင်ထဲက ခံစားချက်ဟုတ်ချင်လည်း ဟုတ်မှာပေါ့ (မပြောပြဘူး)။း)
ဟုတ်တယ်နော်..တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်တိုင်တစ်ယုတယ စိုက်ပျိုးထားပေမယ့်..
ပန်းလေးအနားမှာ ပန်းလေးကို အားပေးနေမယ့် တစ်ခြားပန်းလေးတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ....
ပန်းပွင့်ပုံပြင် ဆိုတော့ ပစောက်တွေချည်းပါလား။းဝ)
ဥယျာဉ်မှူး ပန်းမခူးရ ဆိုပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ခါကျပြန်တော့လဲ ပျိုးသောလက်နှင့်ခူးဆွတ်ချင်သူ၊ ခူးဆွတ်ခံချင်သူတွေ ဒုနှင့်ဒေးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဥယျာဉ်မှူးနှင့်ပန်းခင်း ကွေကွင်းကြတာက များပါတယ်။
နောက်လဲ ပန်းပွင့်ပုံပြင်လိုမျိုးတွေ ဖတ်ရအောင် လင့်ခ်ယူသွားလိုက်ပါတယ်။
ဒီဆူးတွေက အရမ်းခက်တာလားဗျာ.. ရေးထားတာ လွမ်းစရာကောင်းလိုက်တာဗျာ.. သေသွားတဲ့ ပန်းလေးကနေ နောက်အပင်တွေ ထပ်ပေါက်လာပြီး.. ပန်းတွေထပ်ပွင့်လာရင် ဥယျာဉ်မှုးကို အဖော်လုပ်ပေးနိုင်မှာလား.. ဒါမှမဟုတ် အရင်ကလိုပဲ ဆူးတွေကိုသူ ကြောက်နေဦးမှာလား.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ဥယျာဉ်လေးကတော့ အရင်ကတော့ ပိုလှလာမယ်ထင်တာပဲ..
ခစ်..ခစ်.. ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်ဟာကို မေးခွန်းထုပ်ကြည့်တာ....
မအင်ကြင်းက ပိုသိမှာပေါ့ဗျ.. :)
အမယ်လေး ဂျင်းရယ် ရေးတတ်လိုက်တာနော်
" ဒီဆူးတွေက ရှင့်အတွက် မဟုတ်ရပါဘူး။ "
တကယ် ခံစားချက်နဲ့ ရေးထားသလို စာသားတွေရော ခံစားချက်အပိုင်းပါ အရမ်းနုတယ် ခံစားရတာ မျောပါသွားတယ်း)))
ပန်းပွင့် လေးက ဥယျာဉ်မှူးကို ဆူးစူးစေခဲ့ လို့ လား
အပျိုကြီးတွေ...အပျိုကြီးတွေနော်....ရေးချက်တွေကပြောင်မြောက်လှပါပေတယ်။ ကဲပါလေ..ဥယျာဉ်မှူးမခူးလဲ ပန်ဆင်သူတွေ ရှိပါတယ်အေ..။
@ကိုမိုး>>>ကိုမိုးနော်ကိုမိုး.... အပျိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဘယ်နှစ်ခါပြောရမလဲ....အခုမှငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ် နောက်တစ်ခါ အပျိုလေးလို့ပြောပါ :D
တယ်ဟုတ်ပါလားဟ..ဂျင်းရေ.. ခံစားချက်အစစ်တွေထင်ရဲ့ ...
ညီမ ရေးလိုက်တဲ့ ပန်းပွင့် လေး ကို သနားသွားမိတယ် ချစ်စရာ သနားစရာလေးပါ
နောက်ပြီး ညီမ ကို အပျိုကြီးလို့ ပြောသွားတာ ဘယ်တူလည်း ဒုတ်နဲ့ ချောင်းရိုက်အုန်းမယ်
ကိုယ့်ညီမ က အလေးလေး ရှိသေးတာ
ဟေ့ ခလေးမ ဥယျာဉ်မှူးဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ပန်းမခူးရဘူးကွ...လာဝယ်သူတွေ လက်ထဲ ခူးဆွတ်လို့ ထည့်ပေးနေကျ.....
ဒီတော့ လာဝယ်မဲ့သူ စောင့်ပါ ဒါပဲ....
P.S :ဂျင်း...တကယ်တော့ မယုံပါဘူး... အကြောင်းသိပါဆိုမှ.....:P
@မွန်>>> ဟုတ်တယ်နော် မွန်၊ ဒို့အတူတူ ငိုကြမယ်း)
@Ko Ko Maung>>>စာလာဖတ်ပေးတာရော လင့်လေးယူသွားတဲ့အတွက်ရော ကျေးဇူးပါနော်...
@thaw zin soe>>>သော်ဇင်ရေ....ကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးခွန်းထုတ်တာဆိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြေလေ....း))
@ရေသန့်>>>ပန်းပွင့်လေးက ဥယျာဉ်မှူးကို ဆူးစူးစေခဲ့သလားဆိုတာကိုတော့ ဥယျာဉ်မှူးပဲ သိလိမ့်မယ်....
@နုငယ်>>>နုငယ်ရေ....စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားစေတဲ့ အတွက်ဆောရီးနော်း((
@မသဒ္ဓါ>>>ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ မမ...
@ယွန်း>>>တကယ်ကို ခံစားချက် အစစ်နဲ့ တူနေတယ်လားဟင်း)
@မမရွှေစင်>>>ဟုတ်တယ် မမရွှေစင် အဲဒီဦးဗိုက်ပူကို ဒုတ်ကြီးကြီးနဲ့သာချောင်းရိုက်ပါဗျို့ :D
@အမချစ်>>> အမချစ်....အကြောင်းသိရင်လည်း တိတ်တိတ်နေ....ရှူးးးးးးးးးးးးးးး :D
ပန်းပွင့်ဘက်က နေ ခံစားသွားတာ ရေလည်လန်းပါဗျာ
ပန်းတစ်ပွင့် သေဆုံးခြင်း ကိုရင်ခုံသွားပါတယ်၊ ဥယျာဉ်မှူးက ဘာကြောင့် ပန်းတစ်ပွင့်ကို သေစေခဲ့တာလည်း စဉ်းစားနေသည်၊ ပန်းခူးတဲ့ ဥယျာဉ်မှူးတွေအများကြီးပါ။
အတွေးလေးနဲ့ ခံစားချက် ကလေး ကောင်းလိုက်တာ။ ကြက်သီးတောင် ထမိတယ် ..
ပန်းပွင့်လေး နေရာက သရုပ်ဆောင် သွားတာ..
အင်ကြင်းက ကိုယ်ကိုကိုယ် ပန်းလေးတပွင့်လို့ ခံစားရေးဖွဲ့ ထားတာများ နူးညံ့သိမ့်မွေ့ လိုက်တာ...။သီချင်းလေးရော စာတွေရော ဖတ်ပြီး ပန်းလေးရဲ့ ရင်တွင်းက ခံစားချက်တွေကို ဥယျာဉ်မှူးတယောက် နားလည်နိုင်ပါစေလို့....။
ကျနော်က ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း နေထိုင်တွေးတောတတ်တာလားတော့ မသိဘူး.. ဒီလို ခံစားချက်နုနုလေးနဲ့ စာပေလေးတစ်ပုဒ်ကို ရုတ်တရက် ဖတ်လိုက်ရတော့ ဘယ်လိုကော်မန့်ပေးရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး... ဒီပို့စ်လေးကတော့ တကယ်ရသစာပေမြှောက်ပါပေတယ်...
ဒီလိုဥယာဉ်မှူးမျိုးနဲ့ နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ မတွေ့မဆုံမကြုံရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
မြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာလည်း မိန်းခလေးတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ကို ဆွတ်ယူစေချင်သူကို ပြောပြခွင့် မရဘဲ လွဲခဲ့ကြမှာပဲနော်
မိန်းမပျိုလေးတွေအတွက် ထိထိရှရှ ဖြစ်နိင်တဲ့ ပို့စ် လေးပါပဲ။။
သီချင်းလေးကနေ ပွားပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်လေးကို သရုပ်ဖော်ထားတာ
အက်ဆေးလေးသဘောပေါ့နော်... ရေးထားတာ ကောင်းလိုက်တာဗျာ...
သီချင်းလေးကိုခံစားမိပြီးရေးတာလေးကလည်း အရေးကောင်းလိုက်တာ။ ပန်းပွင့်ပုံပြင်လေးထဲကလို ဥယျာဉ်မှူးလေး ပစ်မသွားပါစေနဲ့လို့တော့ ဆုတောင်း ပေးပါတယ်။
so sad.............. I have nothing words for this article. :( :(
ပန်းပွင့်လေးကို နောက်တစ်ခေါက် နမ်းသွားပါတယ်၊ အဲ ဟုတ်ဖူး ဖတ်သွားပါတယ်နော် မမအင်ကြင်း....
ခင်၍ စ သွားသည်၊ သဘောမတွေ့လျှင် ချောကလက်လုံးတွေနဲ့ ဆယ်လုံးလောက်သာ နာနာပစ်လိုက်ပါ..း)
တကယ့်ကို အနှစ်သာရ မြောက်တယ် ...
ဘာမှကို မပြောသွားချင်တော့ဘူး ....
မနေနိုင်တော့ ပြောလိုက်အုန်းမယ် ...
ကိုဏီ ပြောသွားသလိုပါပဲ ...
ဥယျာဉ်မှူးရဲ့ ခံစားချက်က......ပန်းပွင့်ထက်ပိုပြင်းထန်မယ်ထင်တယ်လေ.......။ :)
အချစ်ရသပေါ်လွင်အောင်ရေးထားလို့ ရင်ထဲမှာကိုနင့်သွားအောင် ခံစားရပါတယ်